Lactoperoxidase (LPO), izay hita ao amin'ny glandika salivary sy mammary, dia singa manan-danja amin'ny valin'ny tsimokaretina ilaina amin'ny fitazonana ny fahasalamana tsara am-bava. Ny anjara asa lehibe indrindra amin'ny lactoperoxidase dia ny fanaovana oxidize ions thiocyanate (SCN−) hita amin'ny fitrandrahana ny fisian'ny hydrogen peroxide ka mitondra vokatra izay mampiseho ny hetsika antimicrobial. LPO hita any amin'ny ronono bovine dia ampiharina ao amin'ny indostria ara-pitsaboana, sakafo, sy ny kosmetika noho ny fitovian'izy ireo sy ny firafitra miaraka amin'ny fiovan'ny olombelona.
Ny vokatra momba ny fahadiovana am-bava maoderina dia miharo amina rafitra lactoperoxidase hanolorana safidy tsara indrindra amin'ny menaka fluorida mahazatra. Noho ny fangatahana midadasika amin'ny lactoperoxidase fanampiny, dia nitombo be ny fangatahana nataony nandritra ny taona maro, ary mihamitombo izany.
Inona no atao hoe Lactoperoxidase?
Lactoperoxidase dia enzyme peroxidase fotsiny vokarina avy amin'ny gliosida mucosal, mammary, ary salivary, izay miasa ho toy ny anti-bakteria voajanahary. Amin'ny olombelona, ​​ny enzim lactoperoxidase dia voahodidin'ny fototry LPO. Ity enzim-kazena ity dia matetika hita ao amin'ny biby mampinono, misy ny olombelona, ​​totozy, bovine, rameva, ombidia, omby, osy, Ilama, ary ondry.
LPO dia antimicrobial agent mahery mahomby. Ny fampiasana Lactoperoxidase dia, noho io fitsipika io. Ny fampiharana Lactoperoxidase dia hita eo amin'ny fikajiana ny sakafo, vahaolana ophthalmic, ary fikasana kosmetika. Koa, ny vovony lactoperoxidase dia ampiasaina amin'ny fitsaboana amin'ny fery sy ny nify. Ankoatr'izay, ny LPO dia anti-virus mahomby sy manohitra fivontosana. Ny resahina etsy ambany dia fampiasa lactoperoxidase bebe kokoa:
i. Kanseran'ny nono
Ny homamiadana Lactoperoxidase Ny fahaiza-mitantana dia mifandraika amin'ny fahaizany mampiditra oxidize estradiol. Ity oxidation ity dia mitarika amin'ny adin-tsaina amin'ny oxidative ao amin'ny sela homamiadana. Ny fiasa amin'ny Lactoperoxidase eto dia miteraka fikorontanana misy fiantraikany amin'ny fanjifana oksizenina sy fanangonana hidradrano peroksida intracellular. Vokatr'ireo fanehoan-kevitra ireo dia mamono am-bavony amin'ny sela mikraoba ny LPO. Eo ihany koa ny makrôjika miparitaka amin'ny LPO dia atsangana hamotika ny sela homamiadana, mamono azy ireo.
II. Vokany manohitra bakteria
Ny angovo LPO dia miasa toy ny sisan-javatra voajanahary amin'ny rafi-piarovana mamono tsy miaro ny biolojika ary mameno ny fitrandrahana ny atody thiocyanate ho lasa hypothiocyanate antibacterial. Ny LPO dia afaka manakana ny fitomboan'ny microorganism marobe amin'ny alàlan'ny fihetseham-poznika izay miteraka ny thiocyanate ion ary ny hydrogen peroxide ho toy ny kofactor. Ny hetsika anti-mikroba amin'ny LPO dia miorina amin'ny fananganana atody hypothiocyanite amin'ny alàlan'ny fampandehanana ireo angovo. Ny ion hypothiocyanite dia afaka mihetsika amin'ny membrane bakteria. Miteraka fikorontanana ihany koa izy ireo amin'ny fiasan'ny metabika metabolika manokana. Ny Lactoperoxidase dia mamono ny bakteria Gram-negatif ary miaro ny fitomboana sy ny fampandrosoana ny bakteria miendrika Gram.
III. Lactoperoxidase amin'ny makiazy
Ny fitambaran'ny vovony lactoperoxidase, glucose, thiocyanate, iodide,
ary glucose oxidase, ary fantatra fa mandaitra amin'ny fitehirizana kosmetika.
IV. Lactoperoxidase amin'ny ronono fiarovana
Ny fahaizan'ny lactoperoxidase amin'ny fikojakojana ny kalitao madio amin'ny ronono mandritra ny fe-potoana voafetra dia natsangana tamin'ny sehatry ny fizika sy fikarohana andrana natao tamin'ny faritra isan-karazany ara-jeografika. Ny fitazomana Lactoperoxidase dia azo ampiasaina hitana ny ronono mony azo avy amin'ny karazany maro samihafa. Ny fomba mahomby ny fomba dia miankina amin'ny antony maro. Ireo zavatra ireo dia ahitana ny mari-pana ny ronono mandritra ny vanim-potoana fitsaboana, karazana fahazaran-dratsy mikrôlôjika ary ny habetsahan'ny ronono.
Ny Lactoperoxidase dia misy voka-dratsin'ny bakteria amin'ny ronono manta. Ny angon-dresaka sy fikarohana niaina avy amin'ny fampiharana tena izy dia mampiseho fa ny lactoperoxidase dia azo ampiasaina mihoatra ny fetin'ny mari-pana (15-30 degre Celsius) voalaza ao amin'ny toro-làlana codex tamin'ny 1991. Amin'ny faran'ny faran'ny mari-pana, ny fandinihana samihafa dia mampiseho fa ny fampahavitrihana ny lactoperoxidase dia afaka manemotra ny fitomboan'ny bakteria ronono psychrotrophic ary noho izany dia manemotra ny fitrandrahana ronono mandritra ny andro maromaro raha oharina amin'ny vata fampangatsiahana irery. Zava-dehibe ny manamarika fa ny tanjon'ny fampiasana lactoperoxidase dia tsy ny fiarovana ny ronono ho an'ny fanjifana fa ny hitazomana ny kalitao niaviany.
Ny fampiharana ny fahadiovana tsara amin'ny famokarana ronono dia zava-dehibe amin'ny fahombiazan'ny lactoperoxidase ary amin'ny kalitaon'ny ronono mikroba. Ny fiarovana sy ny fahamasinan'ny ronono dia azo tanterahana amin'ny alàlan'ny fifangaroan'ny fitsaboana amin'ny ronono sy ny fomba fidiovana tsara tsy miankina amin'ny fampiasana lactoperoxidase.
v. Asa hafa
Nasehon'ny fandinihana fa ankoatra ny fiantraikany antivirus, ny Lactoperoxidase dia afaka miaro ny sela biby amin'ny fahasimbana sy ny peroxidation, ary koa singa manan-danja amin'ny rafitra fiarovana amin'ny microorganism pathogen ao amin'ny rafi-pandevonan'ny zaza vao teraka.
Inona ny Rafitra Lactoperoxidase?
Ny rafitra Lactoperoxidase (LPS) dia ahitana singa telo, izay ahitana ny lactoperoxidase, hydrogen peroxide, ary thiocyanate (SCN¯). Ny rafitra Lactoperoxidase dia manana hetsika fanoherana ny bakteria ihany rehefa miara-miasa ireo singa telo ireo. Amin'ny tena fampiasana ny tena izy, raha tsy ampy ny fifantoharana singa iray manokana amin'ny rafitra dia tsy maintsy ampidirina izy io mba hahazoana antoka ny fiantraikan'ny bakteria, izay fantatra amin'ny hoe fampahavitrihana LPS. Amin'izany, ny fifantohana lactoperoxidase dia tsy tokony ho latsaky ny 0.02 U / mL.
Ny fitrandrahana lactoperoxidase voajanahary ao amin'ny ronono bovine dia 1.4 U / mL, izay mety mahafeno an'io fepetra io. Ny SCN¯ dia be mpampiasa amin'ny tsiambaratelo sy ny feon'ny biby. Ao amin'ny ronono, ny fanjifanan'ny thiocyanate dia mitovy kely amin'ny 3-5 μg / mL. Zava-dehibe iray io hamaritana ny hetsika rafitra Lactoperoxidase. Tsiahivina fa ny thiocyanate ilaina ny hamelomana ny rafitra lactoperoxidase dia manodidina ny 15 μg / mL na hafa. Izany no antony ilantsika manampy ny thiocyanate exogenous hamelomana ny rafitra lactoperoxidase. Ny votoatin'ny hidrozenina peroxide ao anaty ronono, izay nihanaka, dia 1-2 μg / Ml ihany, ary mila fampiasa ny hydrogen peroxide ny fampahavitrihana LPS. Izany no antony tokony hanomezan'ny hidrozenina peroxide.
Ny rafitra lactoperoxidase dia manana anjara toerana lehibe amin'ny rafi-kery fanefitra ao anatiny, mety hamono ny bakteria ao anaty tsiambaratelo ronono sy mucosal izy ary mety manana fampiharana fitsaboana.
Amin'ny vokatra fikarakarana ara-tsakafo sy ara-pahasalamana, ampiana na fanamafisana ny rafitra lactoperoxidase indraindray ampiasaina amin'ny fifehezana ny bakteria.
Ny LPS dia misy ny famokarana sangan'asa anti-bakteria avy amin'ny SCN¯catalysed nataon'ny LPO eo anatrehan'ny hydrogen peroxide. Ilay lactoperoxidase voalaza hetsika antimicrobial dia hita ao amin'ny tsiranoka maro ao amin'ny vatana toy ny ranom-boankazo, ranomaso, ary rano. Ireo singa roa manan-danja ho an'ny rafitra antimicrobial, izay hidrogen peroxide sy thiocyanate, dia hita ao anaty ronono ao anaty fifangaroana samihafa, miankina amin'ny karazan-biby sy ny fihinana omena.
Amin'ny ronono mangatsiaka, malemy ny hetsika antimicrobial ary mijanona ho 2 ora satria ny ronono dia tsy ahitana afa-tsy suboptimal ny hydrogen peroxide sy thiocyanate ion. Thiocyanate dia ampiana izay antsoina hoe oxidized amin'ny fihetseham-poonika elektronika manome hypothiocyanite
Thiocyanate miasa toy ny cofactor ho an'ny rafitra Lactoperoxidase. Vokatr'izany, ny isan'ny oxhidized sulfhydryl rehetra dia tsy miankina amin'ny ion thiocyanate raha mbola maharitra ihany
Thiol moiety misy
Thiocyanate dia tsy reraka
Ampy ny hidrozenina peroxide
Thiocyanate dia tsy mbola tafiditra ao anaty asidra amino aromatic
Vokatr'izany, ny thiocyanate dia mamelona indray ny fiadiana amin'ny bakteria ny lactoperoxidase rafitra amin'ny ronono vaovao. Io dia mihitatra ny fiainana talohan'ny ronono eo ambanin'ny fepetra tropikaly mandritra ny fito ka hatramin'ny valo ora.
Lactoperoxidase Application / fampiasana
i. Hetsika fanoherana mikraoba
Ny hetsika anti-mikroba amin'ny rafitry ny lactoperoxidase dia hita ao amin'ny hetsika bakteria sy ny bakteriaostika sasany amin'ny microorganismes hita ao amin'ny ronono manta. Ny mekanisma bakteria dia miasa fa ny tarika thiol hita ao amin'ny sela bitika mikraoba dia misy oksizenina. Izany dia miteraka ny fahapotehana ny rafitry ny membra plasma izay mitondra amin'ny fitrandrahana ny polypeptides, ny ion potassium, ary ny asidra amine. Ny fampiatoana ny purina sy ny pyrimidines, glucose, ary asidra amina asidra dia sakanina. Ny synthesis ny ADN, ny RNA, ary ny proteinina koa dia sakanana.
Ny bakteria samy hafa dia mampiseho ambaratonga samihafa amin'ny fahatsapana lozisialy amin'ny lactoperoxidase. Ny bakteria ratsy-gram, toa an'i Salmonella, Pseudomonas, ary Escherichia coli, dia avela sy maty. Ny bakteria asidra laktika sy ny Streptococcus dia voatsindry fotsiny. Ny fanapotehana ireo bakteria ireo amin'ny alàlan'ny lactoperoxidase dia miteraka ny fitrandrahana otrikaina sasantsasany, manakana ny bakteria tsy hisakafo ao anaty otrikaina, ary izany dia mitarika amin'ny fihenan-kanina na ny fahafatesan'ny bakteria.
II. Fitsaboana ny paradentose, gingivitis, ary famonoana sela fivontosana
LPS dia inoana fa mahomby amin'ny fitsaboana ny gingivitis sy paradentosis. LPO dia nampiasaina am-bava novozaina mba hampihena ny bakteria am-bava ary, vokatr'izany, ny asidra vokarin'ny bakteria ireto. Ny conjugates antibody amin'ny rafitra lactoperoxidase sy glucose oxidase dia nampiseho fa mahomby amin'ny famotehana ary noho izany dia mamono ireo sela misy fivontosana amin'ny vitro. Ary koa ny macrophage miharihary amin'ny rafitra lactoperoxidase dia mandrindra hamono sy hamono ireo sela homamiadana.
Ny fandinihana klinika samihafa izay manazava ny fahombiazan'ny LPS amin'ny famolavolana nify dia efa voarakitra. Aorian'ny fisehoana tsy ankolafy, amin'ny alàlan'ny fandrefesana ny tarehin-javatra manandramana ny karies fanandramana, fa ny fitrandrahana lactoperoxidase misy amyloglucosidase (γ-amylase) dia misy fiantraikany mahasoa amin'ny fikarakarana am-bava. Ny enzim-bolo toy ny glucose oxidase, lysozyme, ary lactoperoxidase dia nafindra mivantana avy amin'ny mason-koditra mankany amin'ny pellicle.
Amin'ny maha olom-boajan'ny “pellicle”, ireo angovo ireo dia mihetsiketsika be dia be. Ary koa, ny LPS dia misy fiantraikany mahasoa amin'ny fisorohana ny kiran'ny zaza am-boalohany amin'ny alàlan'ny fihenan'ny isan'ireo kolonely izay noforonin'ny mikroflora cariogen satria mampitombo ny fifantohan'ny thiocyanate.
Miaraka amin'ny marary xerostomia, ngovo lactoperoxidase no tsara kokoa raha oharina amin'ny atidoha fluorida raha toa ka mamorona plakta. Ny fampiharana ny LPS dia tsy ferana amin'ny periodontitis sy ny karies. Ny fitambaran'ny lactoperoxidase sy lysozyme dia azo ampiasaina amin'ny fitsaboana aretin'andoha may.
Rehefa miaraka amin'ny lactoferrin ny LPS dia mitambatra ny halitosis. Rehefa mitambatra ny LPS miaraka amin'ny lysozyme sy lactoferrin, manampy ny hanatsara ny soritr'aretina xerostomia ny LPS. Ny gels miaraka amin'ny rafitra lactoperoxidase koa dia manampy amin'ny fanatsarana ny soritr'aretin'ny homamiadan'ny vava rehefa voatsindry ny famokandrano ny rano noho ny aretina.
IV. Manatsara ny hery fiarovana
Lactoperoxidase asa antimicrobial mitana andraikitra lehibe ao amin'ny rafitra fiarovana. Hypothiocyanite dia singa mavitrika novokarin'ny hetsika lactoperoxidase amin'ny thiocyanate. Ny hydrogen peroxide dia vokarin'ny proteinina Duox2 (dual oxidase 2). Thiocyanate tsiambaratelo amin'ny marary manana cystic fibrosis. Izany dia miteraka fihenan'ny famokarana hypothiocyanite antimicrobial. Miteraka risika lehibe kokoa amin'ny fifindran'ny làlana izany.
Ny LPS dia manakana ny helicobacter pylori amin'ny fomba mahomby. Saingy amin'ny salavan'ny olombelona manontolo, ny LPS dia mampiseho fiantraikany miady amin'ny bakteria malemy kokoa. Ny LPS dia tsy manafika ny ADN ary tsy mutagenic. Saingy, amin'ny toe-javatra manokana, ny LPS dia mety miteraka fihenjanana kely oksidatif. Voaporofo fa ny LPO amin'ny fisian'ny thiocyanate dia mety mitarika ny fiantraikan'ny cytotoxic sy bactericidal ny hydrogen peroxide ao anaty fepetra manokana, ao anatin'izany ny H2O2 dia misy ny fifangaroan'ny fanehoan-kevitra mihoatra ny thiocyanate.
Ho fanampin'izany, noho ny fananana antibaktera mahery sy mahomby ary ny fanoherana ny hafanana avo, dia ampiasaina ho toy ny anti-bakteria amin'ny fampihenana ny fiarahamonina bakteria amin'ny ronono na ny vokatra vita amin'ny ronono ary ho mariky ny ronono ultra-pasteurization. Amin'ny alàlan'ny fampahavitrihana ny rafitra lactoperoxidase, dia afaka manitatra ihany koa ny fiainana talohan'ny ronono mando.
Ary, ny hypothiocyanate vokarin'ny lactoperoxidase dia azo ampiasaina hanakanana ny virus virus herpes sy ny otrik'aretina immunodeficiency ny olombelona.
Azo antoka ve amin'ny fahasalamana ho an'ny olombelona sy ny biby?
Ny dimy ambinifolo taona ny fampianarana any amin'ny firenena an-dalam-pandrosoana sy mandroso dia notontosaina ary nodinihan'ny FAO / WHO JECFA (Komitin'ny Mpanam-pahaizana momba ny sakafo) Rehefa vita ireo fandinihana lalina sy be dia be, ny fampiasana ny rafitra lactoperoxidase amin'ny fitehirizana ronono dia nankatoavin'ny FAO / WHO JECFA (Komitin'ny Expert momba ny Sakafo ara-tsakafo). Ny manam-pahaizana ihany koa dia nanambara ity fomba ity fa azo antoka ho an'ny fahasalaman'ny olombelona na biby.
Ny LPS dia singa voajanahary ranom-boalavo sy saliva ao amin'ny olombelona ary, noho izany, azo antoka rehefa ampiasaina amin'ny fankatoavana ny tondrozotra momba ny Codex Alimentarius Commission. Ity fomba ity dia tsy misy fiantraikany amin'ny biby manta. Izany dia satria ny fitsaboana ihany dia atao aorian'ny fisarahana ny ronono amin'ny teats.
Miharihary amin'ny resaka ataonay fa ny lactoperoxidase sy ny rafitra lactoperoxidase dia tena mahomby ary tena mahasoa amin'ny fampiharana maro isan-karazany. Raha mitady hanao lafatra ianao mividy lactoperoxidase ho an'ny fikarohana ataonao na ny fivoaran'ny zava-mahadomelina dia aza mijery any ivelany intsony. Azontsika atao ny mametraka fandefasana baiko marobe lactoperoxidase amin'ny fotoana fohy indrindra azo ary alefaso any Etazonia, Eropa, Canada, ary faritra maro hafa eran'izao tontolo izao. Aza misalasala mifandray aminay raha mila fanazavana fanampiny.
Jantschko, PG Furtmüller, M. Allegra et al., "Redox mpanelanelana amin'ny zavamaniry sy mammalian peroxidases: fandalinana fampitaovana fanavaozana miverina amin'ny fanaovan'izy ireo amin'ny derivatives indole," Archives of Biochemistry and Biophysics, vol. 398, tsia. 1, p. 12–22, 2002.
Tenovuo JO (1985). "Ny rafitra peroxidase amin'ny sangan'olombelona." Ao amin'ny Tenovuo JO, Pruitt KM (eds.). Ny rafitra Lactoperoxidase: simika ary misy dikany biolojika. New York: Dekker. p. 272.
Thomas EL, PM Bozeman, Mianara DB: Lactoperoxidase: firafitra sy toetra katalyitikika. Peroxidases amin'ny simika sy biolojia. Namoaka ny: Everse J, Everse KE, Grisham MB. 1991, Boca Raton, FL. CRC Press, 123-142.
Wijkstrom-Frei C, El-Chemaly S, Ali-Rachedi R, Gerson C, Cobas MA, Forteza R, Salathe M, Conner GE (Aogositra 2003). "Lactoperoxidase sy ny fiaramanidina mpiaro ny alàlan'ny fiaramanidina mpiambina". Am. J. Respir. Cell Mol. Biol. 29 (2): 206–12.
Mikola H, Waris M, Tenovuo J: Fampidiran-doha amin'ny virus virus herpes simplex, otrik'aretina syncytial respiratory, ary karazana echovirus 1 nataon'i hypothiocyanite. Antiviral Res. 11, 1995 (26): 2-161.
Haukioja A, Ihalin R, Loimaranta V, Lenander M, Tenovuo J (Septambra 2004). "Ny fahatsapan'ny Helicobacter pylori amin'ny mekanika fiarovan-tena, ny rafitry ny lactoperoxidase, ao anaty tohivoho ary amin'ny ranon-jaton'ny olombelona". Journal of Medical Microbiology. 53 (Pt 9): 855-60.
1.Lintoperoxidase fomba fijery
2.Inona ny Lactoperoxidase?
5. Application / Lactoperoxidase / fampiasana
6.Tsy azo antoka ve ny fahasalaman'ny olombelona sy ny biby?